Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO – Dagaaladii dhacay Bishii Feberaayo iyo khasaaraha cadawga soo gaadhay
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO – Dagaaladii dhacay Bishii Feberaayo iyo khasaaraha cadawga soo gaadhay
Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa noo soo gudbisay warbixinada dagaaladii ugu dambeeyey ay soo ururiyeen faahfaahinta dagaaladaa siday u dheaceen. 20tan dagaalada ayaa cadawga lagu weeraray Bishan Febraayo, dagaaladaaso cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan oo isugu jira naf iyo maal. Dagaalada faahfaahinta la hubsaday khasaaraha cadawga waxaa kaga bakhtiyay ciidan kor u dhaafay 54 askari oo darajooyin kala duwan lahaa, meesha uu dhaawacana ka badnaa intaa. Dagaalada aan lahelin faahfaahinta khasaaraha cadawga waa 7ba dagaal. Waxaa kaloo cawaga lagaga gubay dagaaladda 2ba gaadhi oo kuwa askarta xamaala ah oo ciidankii saarnaa ay noqdeen qaar bakhtiyay iyo kuwa dhaawac helis ah uu soo gaadhay. Dagaaladaa ayaa waxay u dhaceen sidan.
1/2/14 malayko oo dagmada Garbo ee Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
1/2/14 Mandooge oo Dhagxmadow udhaw dagaal CWXO iyo guwa gumaysiga kudhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/2/14 Ciray oo Dhagaxmadow katirsan weerar qorshaysan oo ay cwxo kuqaadeen fiidhiinin ay ciidamada cadawgu lahaayeen waxaana lagaga dilay 10 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
7/2/14 Geedoguun oo Dagmada Dhagxmadow ee Gobolka Jarar katirsan dagaal culus oo kadhacay waxaa ciidamada naflacaariga ah ee gumaysiga loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa wali lahelin.
8/2/14 Harooreeyso oo Galaalshe katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa laga dhaawacay.
9/2/14 Bulxan oo dagmada Gunagado katirsan kamiin ay CWXO ka xidheen waxaa lagu gubay 1 baabuur oo kuwa uu cadawgu adeegsado ah waxaana goobta kubasbeelay gaadhigii iyo wixii saaraaba.
11/2/14 Baasuuke oo dagmada Dhagxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
13/2/14 Xaabo oo dagmada Wardheer ee xarunta Gobolka Doollo katirsan weerar ay CWXO kuqaadeen ciidan uu cadawgu leeyahay oo halkaas kusugnaa waxaa cadawga lagaga dilay 6 askari 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
13/2/14 Bali’oomane iyo madheedh oo Gunagado kawada tirsan dagaalo kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 6 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 13/2/14 Xamudhlay oo Dhagaxmadow katirsan iyo Shucayb oo dudumocadka katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga diay inta lahubsaday 3 askari 2 kalana waa laga dhaawacay.
14/2/14 Taaginxagar oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga Itoobiya lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
16/2/14 Cobolay oo Dhagxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha loogu gaystay khasaare balaadhan oo aan faahfaahintiisa lahaynin.
16/2/14 Khatal oo Qabribayax katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
17/2/14 Suryada oo Qabribayax katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga kudhex maray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
18/2/14 Dagmada Dhuxun weerar mir ah oo ay CWXO kuqaadeen ciidan uu gumaysigu leeyahay oo halkaas ku sugnaa waxaa lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
19/2/14 Atoorka oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kamiin ay H/ hurayaasha xoraynta Ogadenia kaxidheen waxaa soogalay kolonyo baabuur ah oo ay ciidamada cadawgu wateen waxaana goobta lagu gubay 1 baabuur sidoo kale waxaa ciidanka cadawga laga dilay 11 askari 23 kalana waa laga dhaawacay.
19/2/14 Gurumo oo Garbo katirsan waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/2/14 Dawacodhacday oo Qabridahare katirsan waxaa ku gadoomay gaadhi ay wateen ciidamada gumaysiga waxaana magaalada Qabridahare lageeyay dhaawaca 3 askari oo itoobiyaan ah.
20/2/14 Safaari oo Dhagaxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
21/2/14 Dhuure oo Qabridahare katirsa waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 4 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/2/14 Atoorka oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.